Dowladda Puntland oo beenisay in is bedel ku yimid deeqihii waxbarashada ee debedda (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 6, 2013 6:01 b 0
Garoowe, Aug 6, 2013 – Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Mudane Maxamed Cabdiwahaab Axmed ayaa si cad u shaaciyay maanta ?in uu aad u wanaagsan yahay xiriirka ay wasaarada waxbarashada la leedahay dowladdihii ay ka heli jirtay deeqaha waxbarasho.
Agaasimaha oo shir jaraa?id ku qabtay xaruunta wasaarada ee magaalada Garoowe waxaa uu sheegay in ay howluhu yihiin kuwo caadi u socda, isla markaasna ay ardayda Puntland sidii caadiga ahayd u heli doonaan deeqo waxbarasho oo tayo leh iyo taageero caalami ah.
Agaasimaha Guud ee wasaarada waxbarashada Puntland wuxuu sheegay in wakhtigan ay ku mashquulsan yihiin wadda-xaajood ay la leeyihiin dowladda Soomaaliya, taasi oo ah xukuumada keli ah ee hakadka gelisay deeqihii ay siin jirtay Puntland.
? Suudaan waa ?meesha ugu badan ee deeqaha waxbarasho laga helo, waana meesha ugu badan ee ardayda soomaalida ay aadaan, laakiin dowladda dhexe ayaa la hadashay oo u gudbisay arrimo khaldan, laakiin wadda-hadal baa noo socda hadda oo xiriirkeenu waa mid caadi ah? ayuu yiri Cabdiwahaab.
Docda kale wuxuu sheegay in aysan waxba ka jirin arin waayadan dambe la hadal hayey oo sheegaysay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay hakisay aqoonsiga shahaadada ay ardaydu ka qaatan dugsiyda Puntland, wuxuu ugu baaqay waalidiinta Puntland in ay arintaasi ogaadaan lana dar-dar geliyo howlaha waxbarashada.
Dhegeyso shir jaraa?id oo uu qabtay Agaasimaha guud ee wasaarada waxbarashada Puntland
Xillibaano ka tirsan Baarlamanka Dowladda Federaalka ah oo ku soo wajahan deeganada Puntland